भातरका ह्याकरहरुको निसानामा नेपाली अभिनेत्री ? नक्कली फोटो र भिडियो सार्वजनिक रोकिने देखिएन - Filmy News Portal Of Nepal
नेपाल भारत सीमा बि वा द यतिबेला साईबर आ तं कसंग जोडिन पुगेको छ । नेपाल र भारतका ह्याकरहरु लडिरेका छन् । इण्डियन स्पाइडर स्क्वाडले नेपाली एक दर्जन नेपाल नायिकाको नक्कली अ,श्लील भिडियो सार्वजनिक गर्ने ध,म्की दिएको छ । एक जना नायिका त फेक अ,श्लिल अ,श्लील भिडियो सार्वजनिक नै गरिसकेको छ । इण्डियन स्पाइडर स्क्वाडको यस प्रकारको घृ,नित कार्य र ध,म्कीसँगै केही नेपाली नायिकाले यस्को बि,रोध गरेका छन् ।
नायिकाद्वय पूजा शर्मा र आँचल शर्माले फेसबुकमा बि रो ध जनाउँदै स्टाटस लेखेका छन् । पूजा शर्मा : यस्तो घटिया सोच र कार्य गर्नेहरु वि,रुद्ध हामी सबै विवेकशील प्राणी एक भएर लाग्नु जरुरी छ । कसैलाई पनि कसैको इज्जत अस्मिता माथि खेलवाड गर्ने अधिकार छैन । कलाकारलाई मात्रै नभएर यो तपाई हामी सबैलाई पर्न सक्छ ।समयमै सजक हौ ।
यसको वि रु द्ध तुरुन्तै कानुनी उपचार खोजौं । हाम्रो छाता संगठन नेपाल चलचित्र कलाकार संघलाई तुरुन्तै पहल गर्नको लागी हार्दिक अनुरोध गर्दछु । आफ्नो मात्र हैन अरुको पनि इज्जत गर्न सिकौं । यसको वि,रुद्ध सबै एकजुट हौं । जय देश ! जय नारी अस्मिता !
आँचल शर्मा : आफ्नो देशको बारेमा बोल्दा, राष्ट्रिय एकताको बिषयमा अडिग भएर एउटै आवाज निकाल्दा हामी नेपाली छोरी चेलीले यस्तो सहनु पर्ने ? जसले त्यस्ता प्रकारका अ,श्लिल भिडियो बनाएर हाम्रो चरित्र ह,त्या गर्ने र मानसिक तनाव दिने कार्य गरेका छन् ।
तिनीहरुको वि,रुद्धमा एक भएर अघि बढ्न जरुरी छ । यति बेला तपाई समस्थ साथी भाई अनि शुभ चिन्तकको साथको जरुरी छ मलाई । कृपया सहयोग गरिदिनुस् । भिडियो हेर्नुहोस